Ukuhamba, ukuzonwabisa kunye nefashoni, awona macandelo abalulekileyo eCommerce | Ezezimali
I-73% yabathengi iyavuma ukuba bathenga i-intanethi malunga nemiba ethile Uhambo, njengamatikiti enqwelo moya, iihotele okanye iibhasi, kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Kwaye inkcitho yomndilili ekuhambeni ifike kwi- € 715 ye-euro kwi-2018, ngokwengxelo "M-yorhwebo: ukuvela kwevenkile yaseCetelem kwi-intanethi 2018. Kwicandelo lawo, kwa olu phononongo lubonisa ukuba iqonga lamacandelo abaluleke kakhulu agqityiwe ngokuzonwabisa (i-74%) ngokuthengwa kweencwadi, amatikiti, umculo okanye iivenkile ezikwi-Intanethi, kunye nefashoni (66%).
Malunga neendlela zokuthenga, ifowuni ephathekayo inyuka izikhundla. Apho i-63% yamaSpanish aphononongwe nguCetelem ibango lokuthenga kwizixhobo ze-smart. Ngo-2014 eli nani lalingama-25%, oko kukuthi, iipesenti ezingama-38 zingaphantsi kunanamhlanje. Lo mkhwa mobile Ikwafumaneka nakwifayile ye- ukuthengwa kweapps. Ngokwe "X-ray yabasebenzisi be-app transactionional" isifundo esenziwe yiWebloyaltyty kunye ne-IPSOS, abasebenzisi abasi-7 kwabali-10 bayavuma ukuba basebenzisa ii -apps hayi ukukhangela ulwazi kuphela kodwa nokwenza ukuthenga ngeli jelo.
Kodwa ichaphazela njani le ntsingiselo yokusetyenziswa phakathi kwabatyali mali kwiimarike zezabelo? Ewe, ngokungathanga ngqo kuba okwangoku urhwebo lwe-elektroniki aludweliswanga kwimarike yemasheya, ubuncinci kwinto ekubhekiswa kuyo kwintengiso yesitokhwe sikazwelonke. Ukuba ufuna ukwenza le misebenzi kwimarike yemasheya, awuzukukhetha ngaphandle kokuya kwiindawo eUnited States apho ukhuseleko lwezi mpawu zidwelisiwe. Kwicandelo elixabise i-24% kulo nyaka, yenye yezona zinto zintle ezinokufunyanwa kwiWall Street.
1 I-eCommerce idweliswe kwiDow Jones
2 Uninzi lwamaxabiso abameli beli candelo
3 Inkokheli yeAmazon ekuthengeni kwimarike yemasheya
I-eCommerce idweliswe kwiDow Jones
I-ECommerce lelinye lamacandelo asakhasayo kwii-equities zase-US. Ukuzibeka endaweni ecacileyo yokunyuka okukhokelele ekuhlaziyweni kwakhona kwamaxabiso ayo kwiminyaka embalwa. Ngamaxabiso athe ngokuthe chu afakwa kwisalathiso sorhwebo oluphezulu kwihlabathi. Kuluhlu lwezindululo zeemarike zentengiso zibonakaliswa kukungazinzi okuphezulu, Umahluko obaluleke kakhulu phakathi kwamaxabiso abo aphezulu kunye neyona isezantsi. Ngemida kwixabiso layo enokufikelela kwi-7% kwezinye iiseshoni zokurhweba.
Enye yezona zinto zixhaphakileyo kwezi zixabisekileyo zibaluleke kakhulu kukujikeleza kwazo. Ngamanye amagama, banentsebenzo eyiyo kumaxesha okwandisa kuqoqosho. Ngelixa ngokuchaseneyo, izisa isigaba se-bearish ngakumbi kumaxesha amaninzi, njengoko kubonisiwe kwiminyaka yakutshanje. Esi sesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni umngcipheko kwimisebenzi yakho uphezulu kunakwamanye amazwe alinganayo. Apho kuya kufuneka ulumke ngakumbi xa uvula izikhundla kuba ungaphulukana nee-euro ezininzi apha endleleni. Nangona ngesizathu esifanayo, babonisa ukuphononongwa okumangalisayo kwaye ngale ndlela bafana ngengqondo ethile kunye nexabiso lobuchwepheshe obutsha.
Uninzi lwamaxabiso abameli beli candelo
Uluhlu lweenkampani ze-e-commerce ezidweliswe kwi-stock exchange azibonisi sipho sinomtsalane okwangoku, kodwa siyamangalisa. Kungenxa yokuba ziinkampani ezihambisa onke amawaka kunye namawaka ezihloko, yenye yezona volonti ziphakamileyo zikhoyo ngoku. Umzekelo wale meko kutyalo-mali, amaxabiso amathathu aqaqambile ngaphezu kwako konke okonwabela ukhetho lwabatyali mali abancinci nabaphakathi: IAlibaba, iAmazon kunye ne-Ebay. Zixabisekile yonke imihla kwimidiya ekhethekileyo kuba umdla wabo kubalamli bezezimali uphezulu kakhulu. Ngaphezulu kwexabiso lesiko okanye isiko lesiqhelo.
I-e-commerce enkulu yaseTshayina iAlibaba ineendawo zokushishina kunye nezentengiso, kunye namaphepha egxile kuthelekiso lwamaxabiso. Ngengeniso yokuba kwiminyaka yakutshanje ingaphaya kwezigidi ezingama-200.000 zeedola ngenxa yokungena okukhulu kweendlela zayo zeshishini. Kuqhelekile ukuba amaxabiso abo xabisa kwiimarike ze-equity ngaphezu kwe-20%, into engaqhelekanga ngenene kumaxabiso aseleyo. Ukusuka kolu luvo ngokubanzi, lixabiso elinoburharha elijolise kwiprofayili yomsebenzisi echazwe kakuhle.
Inkokheli yeAmazon ekuthengeni kwimarike yemasheya
Enye yokubheja icandelo lezorhwebo elektroniki elisinike lona okoko laqala ukudweliswa kwintengiso yaseMelika kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. Oko kuye, ixabiso lentengiso yesitokhwe elonyuke kakhulu kule minyaka idlulileyo. Ukuza kuthi ga ngoku i Izabelo zixabisa i-60.000% ngaphezulu ngaphezu komhla wokuqala kwayo. Oko kukuthi, abatyali mali abancinci nabaphakathi abathathe izikhundla kweli xabiso ekuqaleni namhlanje banokudityaniswa kwiqela lesigidi esikhulu. Nangona umbuzo obuzwa ngabanye abathengisi kukuba ingaba izabelo zabo zinokwehla ngamandla afanayo nawokunyuka.
Enye yeenkampani ezidwelisiweyo ezineempawu ezifanayo yile Ebay, iwebhusayithi yefandesi online eye yaxabisa kakhulu okoko yaqala ukurhweba kwiimarike zezabelo zaseMelika. Ukuba yenye yeenkwenkwezi zalo nyaka ukuxabisa malunga ne-60%. Ukuba lelinye lawona maxabiso asemagqabini akhoyo kwaye akhoyo kwipotifoliyo yotyalo-mali yabona batyali mali babukhali. Kuba kwiintsuku ezimbalwa unokufumana imbuyekezo ephezulu kakhulu. Ukuya kwinqanaba lokuba imida yabo ingaphezulu kweepesenti zemveli.
Ngayiphi na imeko, kufanele kuqatshelwe ukuba icandelo lezorhwebo elektroniki alikho kwimarike yaseSpain. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, akusayi kubakho sisombululo sinye ngaphandle kokushiya imida yethu siyokuthenga nokuthengisa izabelo zabo. Ngeekhomishini ezandayo eziphindaphindwe kathathu amaxabiso kwiimarike zesizwe. Ukuba lelinye lawona manqaku abuthathaka abonakalisa ezi marike zezimali. Nangona umbuzo obuzwa ngabanye abathengisi kukuba ingaba izabelo zabo zinokwehla ngamandla afanayo nawokunyuka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ukuhamba, ukuzonwabisa kunye nefashoni, awona macandelo abalulekileyo eCommerce